News | नेपाली राजनीति
News | Tag: नेपाली राजनीति
अब के गर्छन् ओली ?
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नयाँ सरकार बनाउन दौडधुप चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न बाँकी दलहरु लागि परेका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्नस्थापनाको घोषणा गरेपछि नयाँ सत्ता समिकरणका लागि दलहरु लागि पर्दै आइरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रमा पार्टीको नाम परिर्वतनका लागि छलफल सुरु !
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा एकपछि गर्दै अर्को नयाँ तरंग पैदा भइराखेको छ । सर्वोच्च अदालतले पुर्व माओवादी केन्द्र र पुर्व नेकपा एमाले व्युताइदिएपछि पछिल्लो समय दुई दल कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ ।
नेकपा एमालेमा बादललाई महत्वपुर्ण पद दिने तयारी !
काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा एकपछि अर्को नयाँ तरंग पैदा भइराखेको छ । सर्वोच्चले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिएर नेकपा एमाल तथा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याइदिएको थियो ।
एजेन्सी । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा देखिएको संकटबारे भारतले चासो देखाएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजना हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले प्रतिनिधिसभा बदरको विषयमा आफ्नो भनाई व्यक्त गरेका छन् ।
विकृतिमा राजनीति कि चुनावमा राजनीति !
देशको राजनीति देखेर चिन्ता नगर्ने नेपाली शायद नै होलान् । म पनि देशको चिन्ता गर्ने नेपालीमा पर्छु । नेताहरुको काम देखेर साह्रै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु । त्यो भन्दा पनि नेताको गुनगान गाएर नथाक्ने सदावहार कार्यकर्ता देखेर बेहोसी मै म बारम्बार बर्बराउछु । तर, मेरो बर्बराइको कुनै अर्थ नै छैन यहाँ किनकि सबै व्यस्थ छन् । आफ्नो–आफ्नो भागबण्डा नपाउने डरमा बिभिन्न ‘हत्काण्ड’ मच्चाउनमा पनि सबै ब्यस्त छन् ।